Muraayadda, Farshaxanka iyo Farshaxanka Warshada Soo-saare-SHUNDA - Warshada Shiinaha Saddex-geesoodka Xarig alwaax ah ee gidaarka Sawirka Sawirka Shafka laga laadlaadsan yahay OEM iyo Warshada | SHUNDA
Warshada Shiinaha Saddex-geesood oo Qaabaysan Xarig Alwaax ah oo gidaar ah Sawirka Sawirka Sheef-ka-salaysan
* Ku soo dhawoow shelf kasta *
alwaax Laadlaadsan Shelf 3-Tier, Boho Rustic Shelefyada Kaydinta Alwaaxda, Khafiif ah oo la cusboonaysiin karo Xadhig Waara Qabanqaabiyaha Qabanqaabiyaha, Shalefyada Bandhiga Sabaynta ee Jikada Qolka jiifka
Qalab qoryo, xadhig
QOLKA ALAHA EE XIGASHA SAABEYNAYA:Soo bandhig qurxinta guriga ee soo jiidashada leh iyo alaabta la ururiyo iyadoo la bixinayo kaydin wax ku ool ah oo leh 3-tier shelf sabayn. Shaanadaha derbiga ah ee ka laadlaadsan waxay siyaan muuqaal gaar ah oo dhab ah gidaar maran waxayna ku darayaan taabashada dhamaystirka qol kasta oo gurigaaga ah.
U FIICAN QOL KASTA:Shelefyadan xadhiga ka laadlaad ah ayaa ah qurxinta derbiga miyiga ah ee waddanka oo aad u wanaagsan qolkaaga qadada, qolka fadhiga, qolka jiifka, guriga beerta, apartment, qolka jiifka, ama xafiiska. Haddii kale, waxaa lagu dhejin karaa derbiga, daaqada horteeda, daaqadda ama barxad, gudaha iyo dibaddaba. Oo waxaa lagu habeyn karaa saddex siddo oo midab leh iyo qabsatooyin isku mid ah.
Qurxinta QARAN & QARAN:Ku fiican sawirada, alaabta lagu ciyaaro, koobabka, khasnada, dhirta yaryar, iyo qurxinta guriga Waxay ku daraysaa dabeecad iyo diirimaad kasta oo casri ah, rustic, warshadaha, ama gudaha dhaqameed Buuxiyaa meel gidaar ah oo madhan ka sarraysa miiska, meesha dabka lagu shido, marinka laga soo galo, faanta, daaqadaha dhexdooda, iyo in ka badan . Ku dheji kuwan qolkaaga fadhiga, qolka jiifka musqusha ama xitaa jikadaaga! Habka ugu fiican ee lagu soo bandhigo dhirtaada, sawiradaada iyo qurxin kasta oo yar.
BADBAADIN FIICAN: Waxay sare u qaadaysaa meel bannaan marka ay qaadayso eber cagood oo labajibbaaran u2014 Waxay yaraynaysaa qaska waxayna muujisaa qurxinta meelaha bannaan ee is haysta Waxay siisaa xalal gaar ah oo guri qaab kasta, aqal istuudiyaha, qolka kuleejka, iyo in ka badan.
SAHAL LAGU RAACDO:Qofadan alwaaxda rusticka ah ku laadlaadsan ee xadhig leh way fududahay in la laadlaadsado. Keliya ka laadlaad ciddi, fur ama jillaab. Xadhiga la hagaajin karo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka soo laadlaadsato dhexda ama labada dhinacba sida lulid, si fududna waa loo siman yahay.
Warshada qurxinta guriga ee Shunda waa shirkad bixisa muraayado xirfad leh oo siisa wax soo saarka,nakhshad,iibka iyo adeega iibka kadib macaamiisha caalamka.Shirkadeena waxay diirada saartaa wax soo saarka iyo naqshadaynta dhamaan noocyada kala duwan ee alaabta shelf sida wareega, shelf moon, shelf alwaax, xadhig. shelf, shelf moon wareegsan, shelf leh muraayad iwm.
Hore: Sawirka gidaarka Xadhig Alwaax u qaabaysan oo saddex-gees ah, Sawirka Sawirka Shafka
Xiga: Warshada Shiinaha nakhshad cusub oo Saddex-geesood ah oo Xarig alwaax ah oo gidaar ah Sawirka Sawirka Shafka
alwaax xadhig xadhig
Gitaarka gidaarka ku rakiban Shelf alwaax sabbaynaya Shelv...
Shelf Saddex-xagal alwaax ah oo gidaar laadlaad ah kaydka saddex-xagalka